सनराइज बैंकले सुरू गर्यो कार्डलेस भुक्तानी, कसरी लिने यस्तो सुविधा ? - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
सनराइज बैंकले सुरू गर्यो कार्डलेस भुक्तानी, कसरी लिने यस्तो सुविधा ?
२०७८ श्रावण, ५ मंगलवार
काठमाडौँ / सनराइज बैंक लिमिटेडले कार्डलेस भुक्तानी सेवाको शुरूवात गरेको छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई समयसापेक्ष सेवा सुविधाहरू दिदै आएको बैंकले कार्ड बिना नै रकम झिक्न सक्ने यस्तो सुविधा शुरू गरेको हो ।
हालसम्म ग्राहकहरुले आफ्नो डेबिट कार्डको प्रयोग गरी एटिएम मेसिनबाट रकम झिक्दै आएकोमा अब यस बैंकको कार्डलेस भुक्तानी प्रयोग गरी कार्डको प्रयोग बिना नै ए.टि.एम बाट रकम झिक्न सक्नेछन् ।
यस सेवा अन्र्तगत ग्राहकहरुले आफ्नो सनराइज स्मार्ट प्लस (मोबाइल बैंकिङ्ग) प्रयोग गरी कार्डलेस विथड्रर अप्सन (Cardless Withdrawal Option) मा गई आफूले भुक्तानी गर्न चाहेको रकम हाली सबमिट गर्नुपर्नेछ ।
त्यसपछि ग्राहकको सम्बन्धित मोबाइल नम्बरमा ओटिपि कोड एसएमएसमार्फत आउनेछ । सनराइज बैंकको ए.टि.एम.मा गई कार्डलेसन विथड्र अप्सन रोजी एसएमसमा आएको ओटिपि कोड प्रयोग गरी कार्ड बिना नै सजिलै रकम झिक्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यस प्रक्रियामा आएको ओटिपि कोड भने गोप्य र सुरक्षित राख्न अति आवश्यक हुन्छ ।
नयाँ र अत्याधुनिक यस प्रबिधिको प्रयोगले भौैतिक कार्ड बोक्न बिर्सेको अबस्थामा पनि मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग ए.टि.एम मार्फत सजिलै रकम झिक्न सकिने छ । सन्राइज बैंकले यस अघि पनि मिस्ड कलबाट बत्तिको बिल भुक्तानी, मोबाइल बिल भुक्तानी जस्ता सजिला र आधुनिक सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । यो सुविधा ग्राहकहरुले बैंकको देशभरी रहेको १६१ वटा ए.टि.एम मार्फत लिन सक्नेछन् ।
सनराइज बैंकको ५१ औं शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा तिलोत्तमा रुपन्देहीमा
सनराइज बैंकको एकै दिनमा ३ शाखा बिस्तार, कहाँ कहाँ खुल्यो
सनराइज बैंकको बाग्लुङमा सेवा विस्तार, बैंकको शाखा संख्या १३९ पुग्यो
सनराइज बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा अर्जुनधारा, गोलधाप झापामा, प्रतिनिधि सुमन राइ नियुक्त
सनराइज बैंकको थप नयाँ ५ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, कलंकीमा एक्सटेन्सन काउण्टर
सनराइज बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा राणा
मेगा बैंकद्वारा बाराका माछा किसानलाई सहुलियत कर्जा
स्थानीयवासीलाई ८ करोडको शेयर बाँड्दै मोलुङ हाइड्रो खोला
राष्ट्र बैंकले आज ४० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोल गर्ने
आज अमेरिकी डलरदेखि कतारी रियालसम्मको विनिमयदर कति होला ?